पुरुष पनि रजस्वला हुने गरेको खुलासा ? – Nepalpostkhabar
पुरुष पनि रजस्वला हुने गरेको खुलासा ?
Hemant KC । ६ बैशाख २०७८, सोमबार ०७:३९ मा प्रकाशित
पूर्णिमा कसलाई मन पर्दैन ? पूर्णिमाको चन्द्रमालाई लिएर धेरै कविहरुले कविता लेखे । यसमा विभिन्न गीतहरु पनि लेखिएका छन् । यसैबीच एक रिसर्चमा एउटा अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ । यो रिसर्च ट्यूनिशिया र कतारका वैज्ञानिकले गरेका हुन् ।
पूर्णिमा का चांद
रिसर्चमा पूर्णिमाका दिन पुरुषको शरीरमा टोस्टोस्टेरोन र कोर्टिसोलको मात्रा बढ्ने गर्दछ । यसकारण उक्त दिन पुरुष अत्याधिक तनावमा हुन्छ । जसका कारण अदृश्यरुपमा पुरुषहरु पनि रजस्वला हुने गरेको पत्ता लागेको हो ।
अहिलेसम्म यो मात्रै थाहा थियो कि, चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षणको प्रभावले पृथ्वीमा ज्वाराभाट आउँछ । यसले समुन्द्रको पानी चन्द्रमाको गुरुत्व प्रभावको दिशामा लान्छ । त्यस्तै रिसर्चका अनुसार चन्द्रमाको प्रभाव मात्र यतिमै सिमित छैन । यसको प्रभाव हाम्रो शक्तिको भित्र पनि पर्दछ । वैज्ञानिकले पूर्णिमाको दिन पुरुषको भित्र विभिन्न हर्मोनल परिवर्तन भएको बताएका छन् ।
यसका कारण पुरुषलाई राती निन्द्रा नलाग्ने हुन्छ । सेक्स हर्मोन भनिने टेस्टास्टेरोन बढ्न थाल्छ । रगतभित्र स्ट्रेस बढाउने हर्मोनको मात्रा बढ्न थाल्छ । स्ट्रेस बढाउने कोर्टिसोलमा वृद्धि हुन्छ । यो रिसर्च कतार र ट्यूनिशियाका वैज्ञानिकले मिलेर गरेका हुन् । यसलाई कतार र ट्यूनिशियाको रिसर्च सेन्टरमा गरिएको थियो ।
पृथ्वी और चंद्रमा
रिसर्च परिणामका अनुसार पछि रिसर्चमा सहभागी वैज्ञानिक इस्माइल डेरगाले यो शोधका लागि पुरुषको रगत पूर्णिमाको दिन र बाँकी दिनमा पनि परीक्षण गरिएको बताए । त्यसपछि आएको यो नतिजाले सबैलाई अचम्मित बनायो ।
वैज्ञानिकले पुरुषको रगतको स्याम्पलमा पूर्ण चन्द्रमाको दिन र बाँकी दिनमा धेरै फरक भेटिएको बताए । पुरुषहरुको रगतको स्याम्पलमा पूर्णिमाको रातमा टेस्टोस्टेरोन र स्लीप हर्मोनको मात्रा धेरै कमी थियो । त्यस्तै यो बेला स्ट्रेस हर्मोन भनिने कोर्टिसोलको मात्रामा वृद्धि भएको थियो ।
बहुमत पुर्‍याउन विपक्षी दल कसरतमा, देउवाले बोलाए पदाधिकारी बैठक
अर्को सरकार नबनुन्जेल राष्ट्रपतिले दिइन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै ‘कामचलाउ’को जिम्मेवारी
पाल्पाका सबै पालिकामा कोरोना अस्पताल तयार
आजै रातिदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य, प्रधानमन्त्री ओली शीतलनिवासमा
एमाले माधव नेपाल समूहका २८ जनाले गरे पार्टी ह्विप उल्लंघन
प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त, ढल्यो कम्युनिष्ट सरकार पाएनन् विश्वासको मत
संसद राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने भए विश्वासको मत दिनुस् – प्रधानमन्त्री ओली